दीपक मनाङेको १० दिनमै गुम्यो मन्त्री पद. – Ap Nepal
दीपक मनाङेको १० दिनमै गुम्यो मन्त्री पद.
May 9, 2021 1050
मनाङे स्वयंले आफू दुइ साता मन्त्री रहने निश्चित हुँदाहुँदै पनि छोटो समयमा सिस्टम बसालेर छाड्नका लागि मन्त्री बनेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । मन्त्री बनेको १० दिनमै मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएपछि उनी पनि काम चलाउ भएका छन् । मनाङेले आफ्नो जिल्लावासीको आग्रहअनुसार मुख्यमन्त्री गुरुङलाई रोज्नुपर्ने बाध्यता भएको बताउँदै आएका थिए । उनले अब सत्तापक्षीय एमालेलाई दिएको साथ कायम राख्छन् वा नयाँ सरकार बनाउने दललाई समर्थन गर्छन् हेर्न बाँकी छ .। रातोपाटीबाट
Prevझापामा यसरी बिच सडकमा झुलटाँगेर सुतेर यी युवाले राखे अनौठो माग (भिडियो सहित)
Nextरहिनन् भारती , बलिउड अभिनेता सोनुले भाबुक हुदै लेखे यस्तो स्टाटस्.. मेरो मुटुमा तिम्रा लागी खास ठाउँ रहनेछ.. (भिडियो)
एकाबिहानै दोलखा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प धक्का
आफ्नो श्रीमान् बचाउन प्र’ हरीसँगै भिख मा गिरहेकी सीता ……